Maxay tahay saameynta ka dhalatay warbaahinta la damiyay ee Kenya? - BBC News Somali
Maxay tahay saameynta ka dhalatay warbaahinta la damiyay ee Kenya?
Shan cisho ayaa laga joogaa markii dowladda Kenya ay hawada ka saartay saddex telefishen oo ah kuwa gaarka loo leeyahay, kadib markii ay si toos ah u tabiyeen xafladda dhaarinta hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga.
Warbaahintan ayaa sheegay inay la kulmeen khasaaro maaliyadeed oo gaaraya kumanaan kun oo doolar oo ay ka heli jireen xayeysiinta. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa amartay in dib loo fasaxo telefishenadani, inkastoo dowladda Kenya ay diiday amarkaasi.
Haddabo saameynta arrintan ay ku yeelatay weriyeyaasha ka howgala telefishenadaasi iyo waxa ay ku dambeyn doonto ayaa weriyaha BBC-da Bashir Maxamed Caato waxaa uu ka wareystay Jamiila Maxamed oo ah gabar weriye ah oo katirsan telefishenka NTV.
Maqal Baafin-16-SEPTEMBER 2019